Oversea Burmese Youth Christian Association
ပြည်ပရောက် မြန်မာ ခရစ်ယန် လူငယ်များ အသင်း
Myanmar Christian Fellowship (The Netherlands) 002
Posted by Mr Htay Tint at 7:18 a.m.2comments: Links to this post
Myanmar Christian Fellowship (The Netherlands) 001
Posted by Mr Htay Tint at 6:28 p.m. No comments: Links to this post
Movie from Bibile
Oversea Burmese Youth Christian Association http://murann.com/BurmeseBible/public/ The Book Of Genesis http://www.youtube.com/watch?v=0i6d6NrUQr0&feature=related
Posted by Mr Htay Tint at 2:43 p.m. No comments: Links to this post
နအအဖ၏ နောက်ဆုံးလမ်းက အခြေအနေ
ဝန်ကြီး ဗိုလ်ပါ မိစ္ဆာပရောဖက်များကို
ရှေးအခါ အီဂျစ်ဘုရင်များကဲ့သို့ 
သားစဉ်မြေးဆက် ရောဂါ ဝေဒနာ
သေလွန်သည့် အခါ သတ်ခဲ့တဲ့
ပြန်လည် ရှင်သန် အသက်ဝင်လာမည် ၊
ဗေဒင်ဆရာ ယတြာ များဖြင့်
ထိုအချိန်တွင် ခံရမည် ။
စဉ်းစား ကြည့်ပါ ။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း။ Revelation ၂ဝ
မျက်နှာတော်ရှေ့မှ ပြေးလွင့်၍ သူတို့နေစရာအရပ်မရှိ။
ပလ္လင်တော်ရှေ့မှာ ရပ်နေကြသည်ကို ငါမြင်၏။
အခြားတပါးသောစာစောင် ကိုလည်း ဖွင့်လေ၏။
၁၃သမုဒ္ဒရာသည် မိမိ၌ရှိသော လူသေတို့ကိုအပ်ပေး၏။
မိမိတို့၌ရှိသော လူသေတို့ကို အပ်ပေးကြ၏။
လူအသီးသီးတို့သည် မိမိတို့ အကျင့်အတိုင်း
ထိုသေခြင်းကား ဒုတိယသေခြင်းဖြစ်သ တည်း။
၁၅အသက်စာစောင်၌ စာရင်းမဝင်သောသူ ရှိသမျှတို့ကိုလည်း
မီးအိုင် ထဲသို့ ချပစ်လေ၏။
မည်သူမပြု မိမိမှု ၊
ဘုရားသ္ခင်က သင့်ကို ကူညီလိမ့်မယ် ။
သင့်ကို ဘုရားသခင်က ပျက်ရယ်ပြုတဲ့နေ့ 
ရောက်မလာခင် ဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါ ။
Dhr Htay Tint
Posted by Mr Htay Tint at 11:28 a.m. No comments: Links to this post
တစ်ပါးတည်း တဦးတည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသည်
ဘုရားဆိုတာ ဘာလဲ ၊တကယ်ရောရှိနေတာလား
ကမ္ဘာဦးကစတင်ပြီး လူတွေက သတ်မှတ်တာလား
ဘုရားက လူတွေကို သတ်မှတ်တာလား
အသက်ရှိသော ဘုရားကတော့ သန့် ရှင်းသောဝိဥာဉ်တော်မှ တဆင့်
သူ့ ကို ယုံကြည်သူများ အပ်နှံသောသူများကို သားတော် သမီးတော်အဖြစ်
လက်ခံပြီး စိတ်ချရသော လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ လမ်းပြနေသည် ။
ဗေဒင် လက္ခဏာ နက္ခတ္တကျမ်း ရှေ့ ဖြစ် နောက်ဖြစ်အကြားအမြင်တွေ
ကံတရားဆိုပြီး ထီပေါက်သူတွေ ။
ကောင်းတာတွေ တသက်လုံးလုပ်ပေမဲ့ 
မြန်မာပြည်ကလူတွေ ဘာကြောင့် ထမင်းငတ်နေပြီး မွဲပြီးရင်းမွဲနေတာလဲ
ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း Isaiah ၄၅း ၁၈
၁၈မိုဃ်းကောင်းကင်ကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ထာဝရဘုရား၊ မြေကြီးကိုပြုပြင်ဖန်ဆင်း၍ အမြဲတည်စေ တော်မူသောအရှင်၊ အချည်းနှီးဖန်းဆင်းသည်မဟုတ်၊ သတ္တဝါနေစရာဘို့ ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသည်ကား ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ ငါမှတပါးအခြားသောဘုရားမရှိ။
ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း Isaiah ၄၃း ၁၀ ၁၁
၁ဝထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကား၊ သင်တို့ သည်၊ ငါ့ကိုသိမှတ်ယုံကြည်၍၊ ငါသည်မှန်ပြီဟု နားလည်မည် အကြောင်း၊ငါ၏သက်သေ၊ ငါရွေးကောက်သော ကျွန်ဖြစ်ကြ၏။ ငါ့ရှေ့မှာဖန်ဆင်းရာထဲက အဘယ်ဘုရားသခင်မျှမဖြစ်၊ င့ါနောက်မှာလည်း၊ အဘယ်ဘုရားသခင်မျှမရှိရာ။ ၁၁ငါတပါးသည် ထာဝရဘုရား ဖြစ်၍၊ ငါမှတပါးကယ်တင်သော သခင်မရှိ။
ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း Isaiah ၄၅း၂၂
၂၂မြေကြီးစွန်းသား အပေါင်းတို့၊ ငါ့ကိုမျှော်ကြည့်၍၊ ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကို ခံကြလော့။ ငါသည်ဘုရားသခင် ဖြစ်၏။ ငါမှတပါး အခြားသော ဘုရားမရှိ။
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် Matthew ၂၆း၆၃
၆၃ယေရှုသည် တိတ်ဆိတ်စွာ နေတော်မူ၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကလည်း၊ သင်သည်ခရစ်တော်တည်း ဟူသောဘုရားသခင်၏ သားတော်မှန်သည် မမှန်သည်ကိုငါတို့အားပြောစေခြင်းငှါ၊ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်ကိုငါတိုင်တည်၍ သင့်ကိုကျိန်ဆိုစေ၏
တမန်တော်ဝတ္တု Acts ၁၄း၁၅
၁၅အချင်းလူတို့၊ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ ပြုကြသနည်း။ ငါတို့သည် သင်တို့ကဲ့သို့လောကဓံတရား၌ ကျင်လည်သောသူဖြစ်ပါ၏။ သင်တို့သည် ဤအချည်းနှီးသောအရာတို့ကို ပယ်ကြ၍၊ ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာမှစ၍ အရပ်ရပ်တို့၌ ရှိလေသမျှ တို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၍၊ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင့်ထံတော်သို့ ပြောင်းလဲရကြမည်အကြောင်း၊ ငါတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပြောကြ၏။
သက်သာလောနိ ၁ Thessalonians 1 ၁း၉
၉ငါတို့သည် သင်တို့အထဲသို့ အဘယ်သို့ဝင်ကြသည် အကြောင်းအရာကို သူတို့သည် ကိုယ်တိုင်ကြားပြောကြ၏။ အသက်နှင့် ပြည့်စုံလျက် မှန်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို သင်တို့သည် ဆောင်ခြင်းငှါ၎င်း၊
ဟေဗြဲသြ၀ါဒစာ Hebrews ၁၀း၃၁
၃၁အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ လက်တော်သို့ ကျရောက်ခြင်းအမှုသည် ကြောက်မက်ဘွယ်သောအမှု ဖြစ်သတည်း။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း Revelation ၇း၂ ၊ ၃
၂အသက်ရှင် တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ တံဆိပ်ပါသောကောင်းကင်တမန် တပါးသည် အရှေ့မျက်နှာက တတ်လာသည်ကိုငါမြင်၏။ သူသည်လည်းမြေနှင့်ပင်လယ်ကို ညှဉ်းဆဲရသောအခွင့်ရှိသော ကောင်းကင်တမန် လေးပါးကိုအသံလွှင့်၍၊ ၃ ငါတို့ဘုရားသခင်၏ကျွန်တို့ကို နဖူး၌ တံဆိပ်မခတ်မည်တိုင်အောင်၊ မြေ၊ ပင်လယ်၊ သစ်ပင်တို့ကို မညှဉ်းဆဲပါနှင့် ဟုကြီးသောအသံနှင့် ကြွေးကြော် လေ၏။
ဟေရှာရအနာဂတ္တိ Isaiah ၄၂း၈
http://www.burmesebible.com/buglish/Isaiah.htm ၈ငါသည် ထာဝရဘုရားဖြစ် ၏။ ထိုနာမသည် ငါ့နာမဖြစ်၏။ ငါ့ဘုန်းကို အခြားသော သူအား၎င်း၊ ငါ့အသရေကို ရုပ်တု ဆင်းတုတို့အား၎င်း ငါမပေး။
တစ်ပါးတည်း တဦးတည်း သူ၏တပည့် တွေကတော့
ခံယူချက် အတွေးအခေါ် ကတော့ အတူတူဘဲနော်
Posted by Mr Htay Tint at 2:08 a.m. No comments: Links to this post
ပြည်ပရောက်မြန်မာလူငယ်များ ခရစ်ယာန်အသင်း အစ သမိုင်း
Posted by OBYCA at 4:42 p.m. No comments: Links to this post
ဒီတပါတ် ခရစ်တော်နောက်လိုက် ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော် အရက်စသောက်ခဲ့ပုံနဲ့ ပြတ်သွားပုံ အကြောင်းအောက်မှာပါတဲ့ လင့်ကနေဖတ်ကြည့်ပါ။
နယ်သာလန်က ဆရာဝန်ကြီးများကပင် အံ့သြကြပါတယ် ။
၂၀၀၉ နှစ်လယ်မှာ ဘီယာသောက်နေရင်း စိတ်ထဲမှာ အံ့သြဘွယ်ရာ ခံစားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ခေါင်းကိုက်ခါ အရက်ဖြတ်ခြင်စီတ် အလိုအလျှောက်ဖြစ်လာပါတယ် ။
၁၅ ဂျွန်လ၂၀၀၉ မှာ တိကနဲဖြတ်ချလိုက်ပါတယ် ။ ရုပ်တရက်ဆိုတော့ ခံစားမှုက အတော့ကိုဆိုးဝါးပါတယ် ။
အချိန်တွေအများကြီး ပိုထွက်လာပါတယ် ။ ဂယောက်ကရဲဖြစ်နေတဲ့ စိတ်တွေနဲ့အပိုချိန်တွေကို ကျမ်းစာဖတ်ပြီး အချိန်ဖြုန်းပါတယ် ။
အချိန်တိုင်း ဆုတောင်း ပါတယ် ။ http://htaytintnl.blogspot.com/2010/04/blog-post_7262.html
ဆေးစစ်ချက်ကလည်း အံ့သြဖွယ်ပါဘဲ ။ အချိန်မှီလာဖြတ်တာပါတဲ့ ။ အသဲရဲ့သွေးကြောအဆက်ကလေးတွေက ရောင်နေပြီး မကြာမှီပျက်စီးတော့မည့် အခြေအနေသို့ ရောက်နေပါပြီ ။ ဆက်သောက်လျှင် နောက်ထပ် ၂ နှစ်ဘဲ အသက်ရှင်ရန် အခွင့်အရေးရှိပါတော့တယ်တဲ့ ။ ဆရာဝန်ကြီးက မေးပါတယ် ။ ဘယ်သူက တိုက်တွန်းလို့အရက်ဖြတ်တာလဲတဲ့ ။ သူငယ်ချင်းများကလည်း မေးကြပါတယ် ။ ၁၇ နှစ်ပေါင်းလာတဲ့ မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေက ပေါင်းလာတဲ့ ကာလ တလျှောက် အရက်ဖြတ်ဖို့တိုက်တွန်းတာမရခဲ့ပါဘူး ။
ဘုရားရှင်က အလိုတော်ရှိလို့ပြတ်စေအချိန်မှာ ကွက်တိပါဘဲ ။ ထူးထူးခြားခြား ဘာဆေးမှ ကူပေးရန်မလိုဘဲ ပြတ်သွားပါတယ် ။
ကျွန်တော် တိုက်တွန်း သက်သေခံချင်တာက သန့် ရှင်အောင်နေပါ ။ ဆုတောင်းပါ ။ မိမိကိုယ်ကိုအပ်နှံထားပါ ။
ဘုရားရှင်က အလိုတော်နဲ့ အညီ ပြည်စုံတဲ့ အချိန်ကျရင် အံ့သြဘွယ်ရာ လမ်းပြ ပြင်ဆင်ခြင်းကို ခံစားရမှာပါလို့ သက်သေခံပါတယ် ။
ရောမ ၈ - ၂၂ မှ ၃၀
ဤလောကတနိုင်ငံလုံးသည် ယခုတိုင် အောင် တညီတညွတ်တည်းညည်းတွား၍ ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာကိုခံရသည် ဟုငါတို့သိကြ၏။ ၂၃ထိုမျှမကဝိညာဉ် တော်၏ ကျေးဇူးတော်အစအဦးကိုခံပြီးသော ငါတို့သည်လည်း၊ သားအရာ၌မြှောက်ခြင်း အကြောင်းတည်း ဟူသောကိုယ် ခန္ဓွာ ရွေးနှုတ်ခြင်းချမ်းသာကိုမြော်လင့်၍၊ စိတ်နှလုံးအထဲ၌ ညည်းတွားလျက်နေကြ၏။ ၂၄ငါတို့ သည် မြော်လင့်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။ မြော်လင့်သောအရာကိုတွေ့မြင်လျှင် မြော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိ၊ တွေ့မြင်သောအရာကိုအဘယ် ကြောင့် မြော်လင့်ရမည်နည်း။ ၂၅ငါတို့သည် မတွေ့မမြင်သောအရာကို မြော်လင့်လျှင်မူကား၊ ထိုအရာကိုသည်းခံသော စိတ်နှင့်ငံ့လင့်၍နေကြ၏။ ၂၆ထိုမှတပါး၊ ငါတို့မတတ်နိုင်သောအရာမှာ ဝိညာဉ်တော်သည် မစတော်မူ၏။ ငါတို့သည် ဆုတောင်း သင့်သည အတိုင်းအဘယ်ဆုကို တောင်းရမည်ဟုမသိကြ။ သို့ရာတွင် ငါတို့ဆုတောင်းခြင်းအမှုကို နှုတ်မမြွက် နိုင်သောညည်းတွားခြင်းအားဖြင့် ဝိညာဉ်တော်သည် စောင့်မတော်မူ၏။ ၂၇စိတ်နှလုံးကိုစစ်တော်မူသော သူသည်လည်း ဝိညာဉ်တော်၏ စိတ်သဘောကိုသိတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဝိညာဉ်တော်သည် သန့်ရှင်းသူတို့ ၏ဆုတောင်းခြင်းအမှုကို ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီစောင့်မတော်မူ၏။
ရောမ ၈ -၂၉ဘုရားသခင်၏ သားတော်သည် အများသောညီတို့တွင်သားဦးဖြစ်တော်မူမည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ရှေ့မဆွေက သိတော်မူသောသူတို့ကို သားတော်၏ပုံသဏ္ဍန်နှင့် တညီတည်းဖြစ်စေခြင်းငှါ ရှေ့မဆွက ခွဲခန့်မှတ်သား တော်မူ၏။
ဧဖက် ၂-၁ဝအဘယ်ကြောင့် နည်းဟူမူကား၊ ငါတို့သည် ကောင်းသောအကျင့်တို့ကို ကျင့်ရမည်အကြောင်း၊ ယေရှုခရစ်၌ ပြုပြင်၍ ဖန်ဆင်းတော်မူရာ ဖြစ်ကြ၏။ ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ ငါတို့သည် ကျင်လည်ရမည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီ။
Posted by Mr Htay Tint at 1:20 a.m. No comments: Links to this post
Labels: ၁၇ မေလ ၂၀၁၀
ဒီနေ့ မှာ သတင်းစကား တခုပါးစရာ ရှိပါတယ် ။
အပြစ် လို့ လွယ်လွယ်လေး ပြောနေကြတဲ့ စကားတလုံး ဖြစ်ပါတယ် ။
အပြစ် စကားလုံး နောက်ကွယ်မှာ မြောက်များစွာ သော ပုံစံတွေရှိနေပါတယ် ။
ရရှိလာမည့် ဆုတွေ ဒဏ်တွေကလည်း
လက်ရှိဘဝမှာကော နောင်သေလွန်ပြီးသော အခါတွေပါ ခံရမှာပါလို ပြောကြပါတယ် ။
အပြစ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ခံယူသူတွေက ရလာမည့်အကျိုးတရားကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကာကွယ်ကြပါတယ် ။
လောကကြီးမှာ အပြစ်မရှိအောင် နေခဲ့သူတွေကလည်း အပြစ်ရဲ့ အကြောင်းတရားက
ရရှိလာမည့် အကျိုးတရားကို လူအတွေးနဲ့ ပင် စဉ်းစားကြည့်ပါ ။
မိတ်ဆွေတို့သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစား စေချင်ပါတယ် ။
မိဘနှစ်ပါးက တဦးနှင့်တဦး ကြည်ဖြူသည်ဖြစ်စေ မကည်ဖြူသည်ဖြစ်စေ ။
တိုတောင်းသော စက္ကန့် ပိုင်းကာလမှာ ညိုညင်မှုဖြစ် တတ်ပါတယ် ။
ထာဝရဘုရား တားမြစ်သည့်ကြားက ဥယာဉ်ထဲက အသီးကို စားကာ
ကာမဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာပြီး လူသားတွေရယ်လို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။
ထာဝရဘုရားရှင် ရည်ရွယ်သော လူသားများသည် သီးခြားနည်းဖြင့် များပြားစွာ မွေးဘွားစေရန်စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း
လူသားအစမှာပင် မိမိဆန္ဒကို ဦးစားပေးခဲ့ပါတယ် ။
ဆန္ဒကို ဦးစားပေးတတ်တဲ့ အကြောင်းတရားကြောင့် အောက်ပါ အကျိုးတရားကို ထာဝ၇ဘုရားရှင် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ် ။
၁၆မိန်းမကိုလည်း သင်၌ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဝေဒနာကို ငါအလွန်များပြားစေမည်။ ပင်ပန်းစွာ ဝေဒနာကို အလွန်များပြားစေမည်။ ပင်ပန်းစွာဝေဒနာကိုခံ၍ သားဘွားရမည်။ ကိုယ်ခင်ပွန်း၏ အလိုသို့ လိုက်၍၊ သူ၏အုပ်စိုးခြင်း ကိုခံရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၁၇ယောက်ျားကိုလည်း၊ ထိုအပင်၏အသီးကိုမစားရဟု ငါပညတ်သော်လည်း၊ သင်သည် မယား၏စကားကိုနားထောင်၍ စားမိသောကြောင့်၊ မြေသည်သင်၏ အတွက် ကျိန်ခြင်းကိုခံလျက်ရှိ၏။ မြေ၏အသီးကို တသက်ပတ်လုံး ပင်ပန်းစွာစားရမည်။ ၁၈ဆူးပင်အမျိုးမျိုး တို့ကိုလည်း သင်အဘို့မြေပေါက်စေမည်။ လယ်၌ဖြစ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကို သင်စားရမည်။ ၁၉သင်ထွက်ရာမြေသို့မပြန်မှီတိုင်အောင်၊ သင်၏မျက်နှာမှ ချွေးထွက်လျက် အစာကိုစားရမည်။ အကြောင်း မူကား၊ သင်သည် မြေမှုန့်ဖြစ်၍၊ မြေမှုန့်သို့ ပြန်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
လူတိုင်းမှာ မွေးပြီဆိုတာနဲ့ 
၁ အပြစ်လေးနဲ့ မွေးလာပါတယ် ။
၂ လူ့ ဘောင်အထဲမှာ လူသားတွေသတ်မှတ် စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာရင်း
မိမိကမသိလိုက်ဘဲ အပြစ်တွေ ကျူးလွန်ပါတော့တယ် ။
၃ ထာဝရ ဘုရားရှင်ကို မသိလို့ ဖြစ်စေ သိလျှက်နှင့် မယုံကြည်လျှင်ဖြစ်စေ
ဘုရားရှင်ချမှတ်ထားသော အပြစ်မှားကို မသေမချင်း ကျူးလွန်ပါတော့တယ် ။
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီအပြစ်တွေက လွတ်နိုင်ပါသလဲ ။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်စ အထိ တိကျသော အဖြေကိုရှာကြပါတယ် ။ လေ့လာခဲ့ကြတယ် ။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်စမှာ အဖြေကို ထာဝရ ဘုရားရှင်က အဖြေပို့ ပေးခဲ့ပါတယ် ။
ထာဝရဘုရားကို ဝေးကွာခဲ့ပြီး ဘာသာရေးဆိုတာ နားမလည်သော အချိန်ကပင်
လူရိုင်းဆိုသူများပင် စိတ်၏ စေတသိတ် စေ့စော်မှုမှတဆင့်
ဒါဟာ အပြစ် ။ ဒါဟာဖြစ်သင့်တယ်ဆို တွေးတောကြပြီး သဘာဝ ဆင်ခြင်ထုံတရားနဲ့လူ့ ဘောင်လောကကို
ကာကွယ် စောင့်ရှေက် ကြပါတယ် ။
တိရိစ္ဆာန် အဆင့်ထက်နဲနဲဘဲ သာပါသည် ။
ထိုသူများအတွက် ရင်လေးစရာပါ ။
၁ဝထိုသူသည် ဤလောက၌ရှိတော်မူပြီ။ ဤလောကကိုလည်း ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ သို့သော်လည်း ဤလောကသည် ထိုသူကိုမသိ။ ၁၁သူသည်မိမိဒေသအရပ်သို့ကြွလာသော်လည်း၊ မိမိလူမျိုးတို့သည် သူ့ကို လက်မခံဘဲနေကြ၏။ ၁၂ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အား၊ ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ ၁၃ထိုသားတို့မူကား၊ လူမျိုးနှင့်စပ်ဆိုင်၍ ဘွားသော သားမဟုတ်။ မေထုန်သံဝါသအားဖြင့် ဘွားသောသားမဟုတ်။ လူအလိုအလျောက်ဘွားသောသားမဟုတ်။ ဘုရားသခင် ဘွားတော်မူသောသားဖြစ်သတည်း။
၁၁ငါသည်ခမည်းတော်၌ရှိသည်ကို၎င်း၊ ခမည်းတော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူသည် ကို၎င်း ယုံကြလော့။ ငါ့စကားကိုမယုံလျှင်၊ ငါ့အမှုတို့ကိုထောက်၌ ယုံကြလော့။ ၁၂ငါအမှန်အကန် ဆိုသည်ကား၊ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် ငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည်။ ထိုအမှုတို့ထက်သာ၍ ကြီးသောအမှုတို့ကိုလည်းပြုလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွား၍၊ ၁၃သင်တို့သည် ငါ၏ နာမကို အမှီပြုလျက်ဆုတောင်းသမျှအတိုင်းငါပြုမည်။ အကြောင်းမူကား၊ ခမည်းတော်သည် သားတော်အားဖြင့် ဘုန်းထင်ရှားတော်မူခြင်းရှိမည်အကြောင်းတည်း။ ၁၄သင်တို့သည် ငါ၏နာမကိုအမှီပြု၍ တစုံတခုသောဆုကို တောင်းလျှင်၊ တောင်းသည်အတိုင်းငါပြုမည်။
တပည့်တော်တို့သည် စည်းဝေးကြသောအရပ်သို့ ယေရှုသည်ကြွလာ၍ အလယ်မှာ ရပ်တော်မူလျက်၊ သင်တို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်း ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ၂ဝထိုသို့မိန့်တော်မူပြီးမှ လက်တော်နှင့် နံဖေးတော်ကို ပြတော်မူ၏။ ( ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်မှာ သူအသတ်မခံခင်က ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း သူ့ ကို ယုံကြည်သူများအပြစ်အတွက် သေခြင်းကို ခံယူခဲ့သည် ။ အပြစ်ဒဏ်မှ လွတ်မြောက်ပြီး ပြန်လည် အသက်ရှင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ သို့ အတွက် မသေခင်က ဒဏ်ရာများကို သက်သေအဖြစ်ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ် )အတွက် တပည့်တော်တို့သည် သခင်ကိုမြင်လျှင် ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။ ၂၁တဖန် ယေရှုက၊ သင်တို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိလေသတည်း။ ခမည်းတော်သည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ သည်နည်းတူ၊ သင်တို့ကိုငါစေလွှတ် သည်ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ ၂၂ထိုသူတို့အပေါ်မှာ မှုတ်လျက်၊ သင်တို့ သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ခံကြလော့။ ၂၃အကြင်သူ၏အပြစ်ကို သင်တို့လွှတ်လျှင် ထိုသူသည်အပြစ် လွတ်လျက်ရှိ၏။ အကြင်သူ၏အပြစ်ကို သင်တို့တည်စေလျှင်၊ ထိုသူသည်အပြစ် တည် လျက်ရှိ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။
၂၉ယေရှုကလည်း၊ သင်သည်ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့် ယုံခြင်းရှိ၏။ ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။
မိတ်ဆွေ သင်တို့ အပြစ်ကို အမှန်တကယ် လွတ်မြောက်ရန် ကယ်တင်သူသည် ကိုယ်တော်ရှင် ယေရှု ပင်ဖြစ်ပါသည် ။
ကိုယ်တော်အတွက် မလေးလေးဝါက ဂုဏ်ပြုတေးနဲ့ချီးမွမ်းပါမယ် ။
Posted by Mr Htay Tint at 8:46 a.m. No comments: Links to this post
Labels: ၅ မေလ ၂၀၁၀
New Beliver from Netherland
Students from free University read the bible some time. They visited some sonday in the church for joy together music section. Last time God touch their heart to beliver.
ယေရှု နှင့် ခမည်းတော်
19 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.
၁၉ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့အား ငါ့အမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ခမည်းတော်ပြုတော်မူသော အမှုကို သားတော်သည် မြင်၍သာပြု၏။ မိမိအလိုအလျောက် အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်။ ခမည်းတော်ပြုတော်မူ သမျှအတိုင်း သားတော်လည်းပြု၏။
20 De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan!
၂ဝခမည်းတော်သည် သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ ပြုတော်မူသမျှတို့ကို သားတော်အား ပြတော်မူ၏။ သင်တို့သည် အံ့ဘွယ်ရှိစေခြင်းငှါ ဤမျှမကသာ၍ကြီးစွာသော အမှုအရာ တို့ကို သားတော်အား ပြတော်မူလိမ့်မည်။
21 Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil.
၂၁ခမည်းတော်သည် သေလွန်သောသူတို့ကို ထမြောက်ရှင်ပြန်စေ တော်မူ သကဲ့သို့၊ ထိုနည်းတူ သားတော်သည်လည်း အလိုရှိသမျှသောသူတို့ကို ရှင်စေ၏။
22 De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd.
၂၂လူအပေါင်း တို့သည် ခမည်းတော်ကို ရိုသေသည် နည်းတူ၊
23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.
၂၃သားတော်ကို ရိုသေစေမည်အကြောင်း၊ ခမည်းတော်သည် အဘယ်သူကိုမျှ တရားစီရင်တော်မမူ။ တရား စီရင်ခြင်းအခွင့် ရှိသမျှကို သားတော်အား အပ်ပေးတော်မူ၏။ သားတော်ကို မရိုသေသောသူသည်ကား၊ သားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်ကို မရိုသေသောသူဖြစ်၏။
24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.
၂၄ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့စကားကို နားထောင်၍ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသော သူကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကို ရသည်ဖြစ်၍ အပြစ်စီရင် ခြင်းကိုမခံရ။ သေခြင်းမှ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်သောသူဖြစ်၏။
25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.
၂၅ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သေလွန်သောသူတို့သည် ဘုရားသခင်သားတော်၏ စကား သံကိုကြား၍၊ ကြားသောအားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည့်အချိန်ကာလသည် လာ၍ယခုပင် ရောက် လျက်ရှိ၏။
26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven.
၂၆အကြောင်းမူကား၊ ခမည်းတော်သည် ကိုယ်၌ အသက်ရှိတော်မူသည်နည်းတူ သားတော်သည် မိမိ၌ အသက်ရှိရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။
27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen.
၂၇သားတော်သည် လူသားဖြစ်သောကြောင့် တရားစီရင်ခြင်း အခွင့်ကိုလည်း အပ်ပေးတော်မူ၏။
28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen
၂၈ဤအမှုအရာကို အံ့သြခြင်းမရှိကြနှင့်။ သင်္ချိုင်းများမှာ ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည် သားတော်၏စကားသံကို ကြား၍၊
29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.
၂၉ထွက်ရမည့်အချိန်ကာလ ရောက်လတံ့။ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူတို့သည် အသက်ရှင်ရာထမြောက် ခြင်းသို့၎င်း၊ ဆိုးယုတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သောသူတို့သည် အပြစ်စီရင်ရာ ထမြောက်ခြင်းသို့၎င်း ထွက်ရကြလတံ့။
30 Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.
၃ဝငါသည် ကို်ယ်အလိုအလျောက် အဘယ်အမှုကိုမျှ မပြုနိုင်။ ငါသည်ကြားသည်အတိုင်း တရားစီရင်၏။ ငါစီရင်ခြင်း သည်လည်း တရားတော်နှင့်ညီညွတ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ကိုယ်အလိုသို့မလိုက်။ ငါ့ကိုစေလွှတ် တော်မူသော ခမည်းတော်၏အလိုသို့ လိုက်၏။
31 Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar,
၃၁ငါသည် ကိုယ်အကြောင်းကို သက်သေခံလျှင် ငါ့သက်သေမတည်။
32 maar iemand anders getuigt over mij, en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is.
၃၂ငါ၏အကြောင်းကို သက်သေခံ သောသူတပါးရှိသေး၏။ ထိုသူ၏သက်သေတည်ကြောင်းကို ငါသိ၏။
33 U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd.
၃၃သင်တို့သည် ယောဟန်ထံသို့ စေလွှတ်ကြ၏။ သူသည် သမ္မာတရားဘက်၌ သက်သေခံ၏။
34 Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden.
၃၄သို့သော်လည်း လူပေးသောသက်သေကို ငါသည် ပမာဏမပြု။ သင်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်မည်အကြောင်း ဤစကားကိုငါပြော၏။
35 Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd.
၃၅ယောဟန်သည် ညှိထွန်း၍ လင်းသော ဆီမီးဖြစ်၏။ သင်တို့သည် သူ၏အလင်း၌ ခဏသာမွေ့လျော်ခြင်းငှါ အလိုရှိကြ၏။
36 Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden.
၃၆ယောဟန်၏သက်သေထက် သာ၍ကြီးသောသက်သေသည် ငါ၌ရှိ၏။ အကြင်အမှုတို့ကို ငါပြီးစီးစေခြင်းငှါ ခမည်းတော်သည် ငါ့လက်သို့ အပ်တော် မူ၍၊ ငါပြုသောထိုအမှုတို့သည်လည်း ငါ့ဘက်၌နေ ၍၊ ခမည်းတော်သည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသည်အကြောင်းကို သက်သေခံကြ၏။
37 De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien,
၃၇ခမည်းတော်သည်လည်း ငါ့ဘက်၌ သက်သေခံတော်မူ၏။ ခမည်းတော်၏ စကားသံတော်ကို သင်တို့သည်မကြား၊ သဏ္ဍာန်တော် ကိုမမြင်၊
38 en u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof.
၃၈နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်း သင်တို့၌မတည်။ အကြောင်းမူကား၊ စေလွှတ်တော်မူသောသူကို သင်တို့သည် မယုံကြည်ဘဲနေကြ၏။
39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij,
၃၉ကျမ်းစာအားဖြင့် ထာဝရအသက်ကို ရမည်ဟုစိတ်ထင်နှင့် သင်တို့သည်ကျမ်းစာကို စေ့စေ့ကြည့် ရှုကြ၏။ ထိုကျမ်းစာပင် ငါ၏သက်သေဖြစ်၏။
၄ဝသင်တို့သည် အသက်ကိုရအောင် ငါ့ထံသို့လာခြင်းငှါ အလိုမရှိကြ။
41 Niet dat de mensen mij moeten eren,
42 maar ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u.
၄၂သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် သင်တို့၌မရှိသည်ကို ငါသိ၏။
43 Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren.
၄၃ငါသည် ခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့် ရောက်လာသော်လည်း သင်တို့သည် ငါ့ကိုလက်မခံကြ။ အခြားသော သူသည် မိမိအခွင့်နှင့်ရောက်လာလျှင် ထိုသူကို လက်ခံကြလိမ့်မည်။
44 Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven.
၄၄အချင်းချင်းပေးသော ဘုန်းအရေကိုသာ ခံ၍၊ ဘုရားသခင်သာလျှင် ပေးတော်မူတတ်သော ဘုန်းအသရေကို အလိုမရှိသော သင်တို့သည် အဘယ်သို့ယုံကြည် နိုင်မည်နည်း။
45 U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan.
၄၅ခမည်းတော်ရှေ့၌ ငါသည် သင်တို့ကို အပြစ်တင်မည်ဟု မထင်ကြနှင့်။ သင်တို့ကို အပြစ်တင်သော သူတပါးရှိသေး၏။ ထိုသူကား သင်တို့ကိုး စားသော မောရှေပေတည်း။
46 Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven.
၄၆သင်တို့သည် မောရှေ၏စကားကို ယုံလျှင် ငါ့စကားကိုမယုံဘဲမနေနိုင်ကြ။ အကြောင်းမူကား၊ မောရှေသည် ငါ့အကြောင်းကိုရေးထား၏။
47 Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg?’
၄၇သူရေးထားသောစာကို သင်တို့သည် မယုံလျှင်၊ ငါ့စကားကို အဘယ်သို့ယုံနိုင်မည်နည်းဟု ယုဒလူတို့အား မိန့်တော်မူ၏။
Posted by Mr Htay Tint at 10:48 a.m. No comments: Links to this post
First Day of OBYCA
ဤ Postcard ရောင်း၍ ရံပုံငွေစခဲကြ ၁၉၉၂ Bangkok
ယေရှူနာမဉ် ဖိတ်ခေါ် ခြင်း
ဤအသင်း သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ
ဘန်ကောက်မြို့ ရှိ မြန်မာ့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး NGOs များရှိ
တာဝန် ရှိသူများမှစတင်စုပေါင်း တည်ထောင်လာခဲ့ ကြပြီးထို
ဒေသတွင်းရှိ မြန်မာအသင်းတော်များ ၏ အဖက်ဖက်မှ ပါဝင်
ကူညီထောက်ခံ အားပေး မှူ များ နှင့် အတူ ဧ၀ံဂေလိနှင့် လူမှူ
ယနေ့ တွင်ထိုအသင်းသားအများစုသည်ဒေသအသီးသီးနိုင်ငံ အသီးသီးသို့ ရောက် ရှိသွားကြ ပြီး မိမိတို့ နီးစပ် ရာဂိုင်း ဂ ဏ
ပေါင်းစုံ ၊ အသင်း တော်ပေါင်းစုံတွင်ပါဝင်လျှက်ရှိသည့် အပြင်
နိုင်ငံ အသီးသီးရောက်သွားကြသည် မိမိတို့ အချင်းချင်းလည်း
ဆက်လက်၍ ရေရှူ၏နာမဉ် အွန်လိုင်းမှ အပြန်အလှန်ခွန်အား
ပေး ဝေငှ ကြခြင်းနှင့် အတူ ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိသော လူမှူ
လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိကြပေသည်။
ယုံကြည်သူ မိတ် ဆွေ ညီကို မောင်နှမ များ အနေဖြင့် လည်း
ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် အ တူ ပါဝင် မိတ်သဟာယ ဖွဲ့ ကြ ပါရန် ယေရှူ
နာမဉ် ရိုးသားနိုမ့် ချ စွာ ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည် ။
a stronghold in time of trouble."
Contact Email : : OBYCA1992@gmail.com
( ပြည်ပရောက်မြန်မာလူငယ်များခရစ်ယန် အသင်း )
စာမှူများ ပေးပို ကြပါရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည် ။
သို့ စာမူများ ပေးပို့ ခြင်းအားဖြင့် လည်း ပါဝင်
ကူညီ လုပ်ဆောင်ကြပါရန်.ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် ။
( ၁ ) သက်သေခံချက် များ
( ၂ ) ကဗျာများ
( ၃ ) ဆောင်းပါးများ
( ၄ ) ဝေငှ ခွန်အားပေးချက်များ
( ၅ ) အခြား ...
နာမတော်ဉ် ရိုးသား နိမ့် ချ စွာ ဖြင့်....
နှစ်သက်သော လင့် များ
ဒုက္ခသယ် များ ဧ၀ံဂေလိ ( ကနေဒါ )
ထောင်တွင်း ဧ၀ံဂေလိ ( ကနေဒါ )
(Gospal Network )
စိုက်ပျိုးသောသူ ရေလောင်းသောသူများရှိရာသို့ မျိုးစေ့ များ ကို
ယူဆောင်လာခြင်း အလို့ ငှါ ငါတို့ သည် ဘုရားရှင် ချ ထားရာ ပို့ 
ထား ရာ နေ ရာ ဒေ သ နိင်ငံ အ သီးသီး တို့ မှ အခွင့် ပေး သမျှ
ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ်စွမ်း ရှိသမျှ တို့ နှင့် အလို တော် ကို အတူ တကွ
လစဉ် အစာရှောင် ဆုတောင်းခြင်းမှ ဘုရားရှင် လမ်းပြ သောထို
ဒေသမှ ညီအကိုများအတွက် အသက်မွေး လောက်သော အစာ
ကို အခါအားလျှော်စွာ မျှဝေပို့ ဆောင်ကြ ရ င်း ................
Burmese Blog Ministry
၁၇ မေလ ၂၀၁၀ (1)
၅ မေလ ၂၀၁၀ (1)
တခုခု ခွန်အားပေးဝေငှခဲ့ ကြပါ
ရဇ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့် ထက် သနားခြင်း ဂရုဏာ အကျင့် ကို ငါနှစ်သက်တော်မူ ၏ ။
Myanmar Christian Fellowship (The Netherlands) 002...